မိုးသီးဇွန် We fight we win | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မိုးသီးဇွန် We fight we win
မိုးသီးဇွန် We fight we win
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on Sep 1, 2012 in Myanma News, Opinions & Discussion | 31 comments
အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် ကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့ တပ်ချုပ်ဟောင်းများဖြစ်တဲ့ ကိုမိုးသီးဇွန်၊ ကိုထွန်းအောင်ကျော် တို့အပါအဝင် ပြည်ပရောက် အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများ ဒီနေ့ရန်ကုန်လေဆိပ်ရောက်မယ်လို့ သတင်းများမှာဖတ်ရတယ်။ ဒေါက်တာနိုင်အောင်၊ ဒေါက်တာသောင်းထွန်း၊ ကိုညိုအုန်းမြင့်တို့လည်း ရောက်နေပါပြီ။ ကိုတပ်ခေါ်တာ လူခြင်းသိလို့မဟုတ်ပါဘူး၊ အသက်သိပ်မကြီးသေးလို့ပါ၊ သမဒဂျီးက ကျန်နေသေးတဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပ အတိုက်အခံများအားလုံးကို ရှစ်လေးလုံးလှုပ်ရှားမှုမျိုးဆက် တခုလုံးအနေနဲ့ တွေ့မယ်နဲ့ တူပါတယ်။ တော်လှန်ရေးမှာ မှတ်ကျောက်အတင် ခံပြီးသူများ အရည်အချင်းရှိသူများဖြစ်လို့ ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါ၏။ တဆက်ထဲမှာပဲ သူတို့နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မရင်းနှီးလိုက်တာ ဝမ်းနည်းလို့ မဆုံးပါ၊ အခုမှတော့ နောက်ကျသွားပြီ၊ အစောတုံးကလည်း သိဘူးလေဗျာ၊ အဘစိန်ဂျီး ဒီလောက်မြန်မယ်လို့..
ကိုမိုးသီးနဲ့ ဒေါက်တာသောင်းထွန်းတို့ကု ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုပွဲတွေမှာ အနီးကပ် တွေ့ဖူးပြီး ကျန်လူများကိုတော့ အခွင့်ကြုံမှ မြင်ဖူးပါတယ်။ ကိုမူးသာ ပျောက်ကျားစစ် ယူနီဖောင်းနဲ့ ဆန္ဒပြပွဲများမှာ တွေ့တယ်။ ဒေါက်တာသောင်းထွန်းက အဝေးရောက် အစိုးရအဖွဲ့ ယူအန်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတော့ ယူအန်ရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြပွဲ များမှာ ခဏခဏတွေ့ရပါတယ်။ သူ့အမျိုးသမီးက သူ့ထက်ငယ်ပါတယ်။ သူနဲ့တွဲပြီး ခဏခဏတွေ့မိတော့ သူ့သမီးမှတ်တာ ကံကောင်းလို့ အသိစောတယ်။
ကိုမိုးသီးအကြောင်းကတော့ ပြောဖို့ပိုများပါတယ်။ သူ့ကိုယ် ၂၀၀၃ခုနှစ်လောက်မှာ အနီးကပ်စတွေ့ဖူးတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ဆန္ဒပြပွဲများမှာပါ။ အတွေးအခေါ်ရဲ၊ စကားပြောကောင်း။ မိန့်ခွန်းပေးရင် အပြတ်အတောက်မရှိ တောက်လျောက်လက်တမ်း ပြောနိုင်လို့ သဘောကျပါတယ်။ အပြင်လူအနေနဲ့ သိရသလောက် ရိုးသားတယ်၊ ပြတ်သားတယ်၊ စိတ်ရင်းကောင်းတယ်၊ နိုင်ငံရေးသမားစိတ် အပြည့်ရှိတယ်။ ကိုလံဘီယာ ယူနီဘာစီတီကနေ မဟာဘွဲ့ရထားတယ်။ သူ့အပြော သူရေးတဲ့စာတွေဖတ်ကြည့်ရင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး အတော်သိနားလည်ပုံရတယ်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်က ကရင်-ဗမာ ကပြားလို့ သူရေးတဲ့ စာတွေမှာ ဖတ်ရတယ်။ သူ့အဖေက စစ်မှုထမ်းဟောင်းပါ။ တပ်ကြပ်တဦးလို့ထင်တယ်။
၁၉၈၈ခုနှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် http://komoethee.blogspot.com/
နယူးယောက် ဆန္ဒပြပွဲများမှာ သူဦးဆောင်ရင် လူများလေ့ရှိတယ်။ ပြည်ပမှာ ဆန္ဒပြပွဲလုပ်လို့ လူလေးငါးဆယ် လာရင် အောင်မြင်တယ်လို့ အကြမ်းအားဖြင့် သတ်မှတ်ပါတယ်။ တရာလောက် ရှိလို့ကတော့ ပွဲစီစဉ်သူများ တပြုံးပြုံးနဲ့ပါ။ အစားအသောက် အပျော်အပါး မပါတဲ့ နိုင်ငံရေးပွဲမျိုးကို ပြောပါတယ်။ ၂၀၀ဝခုနှစ် အစောပိုင်း နှစ်တခုမှာ ကျင်းပတဲ့ ယူအန်ဌာနချုပ်ရှေ့ ရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည် ဆန္ဒပြပွဲတခုမှာ ကိုမိုးသီးရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ လူပေါင်း လေးငါးရာနီးပါ စုံမိကြပါတယ်။ သူ့အရင် နှစ်စဉ်မပျက်မကွက် အခမ်းအနား လုပ်ခဲ့သူများကိုယ်တိုင် အသိအမှတ်ပြုရတယ်လို့ ကြားမိပါတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲလာသူများလည်း အချင်းချင်း လက်တို့ပြီး မိုးသီးဇွန်ဆိုတာ ဘယ်သူလည်း မေးစမ်းကြည့်ကြရတာပေါ့နော်။ ရှစ်ဆဲ့ရှစ်လူထုအုံကြွမှုမှာ တက်တက်ကြွကြွ မပါဝင်ဖူးသူများ၊ အသက်အရွယ်ကြောင့် မမှီလိုက်သူများအတွက် မင်းကိုနိုင် မိုးသီးဇွန်ဆိုတာ နာမည်သာ ကြားဖူးကြတာပါ။
အဲတုန်းက သူပြောတဲ့အထဲတွေမှာ ဘုန်းကြီးများကို လူထုရှေ့ထွက် ရပ်ပေးဖို့၊ မြန်မာတို့ရဲ့ မကောင်းတဲ့ သောက်ကျင့်များ ဖျောက်ဖို့၊ ပြည်ပရောက်များ စည်းလုံးဖို့၊ နောက်တခုက လယ်သမား၊ အလုပ်သမာအရေး လယ်လုပ်သူ လယ်ပိုင်ခွင့် စတာတွေ အသားပေးပြောတာ မှတ်မိတယ်။ ဟော့တ်ဖြစ်နေတဲ့ လယ်ယာမြေ မတရားသိမ်းခံရမှုများနဲ့ သတိရလို့ ပြောတာပါ။ တရုတ်နိုင်ငံသမိုင်း မြေယာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို အတော် လေ့လာထားပုံရ၊ မြန်မာပြည်နဲ့ ဆက်စပ်မြင်ခဲ့ပုံရတယ်။ စိတ်ရင်းကောင်းလို့ သူ့နာမည်အသုံးချ၊ သူ့လူများ တလွဲလုပ်တာ အချောင်ခံရတာများလည်း ကြားဖူပါတယ်။ တဖက်မှာလည်း စစ်တပ်စပိုင်များ၊ မလိုသူများရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိုးနှက်ချက်၊ သွားပုတ်လေလွင့် ရေးသားချက်များ နားမဆံ့အောင် ဖတ်ရှုကြားသိရ ပြန်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် စင်ပေါ်ရောက်လို့ စကားပြောရင် မင်းသားက မင်းသားပါပဲ။ ပရိတ်သတ်ကို အဆွဲဆောင် နိုင်ဆုံးက ကိုမိုးသီးလို့ နားလည်ထားပါတယ်။
အခြားခေါင်းဆောင်များလည်း နာမည်တလုံး သမိုင်းတခု ကိုယ်စီနဲ့ပါ၊ သို့သော် သူ့လောက် အပြောအဟော မကောင်းဘူး။ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း စည်းရုံးနိုင်မှု၊ ခေါင်းဆောင်ပေးနိုင်မှု ဘယ်လောက်ရှိသလဲတော့ မသိပါဘူး၊ အပြင်ပရိတ်သတ် အနေနဲ့ ပြောတာပါ။
၈၈၈၈အရေးတော်ပုံ ကာလအတွင်း သူ့ကို ဗကသအဖွဲချုပ်ရဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး၊ ဥက္ကဌမင်းကိုနိုင်၊ ဒုဥက္ကဌကိုကိုကြီးလို့ အများသိပါတယ်။ ဟောပြောပွဲတွေမှာ ကချင်ပုဆိုးနဲ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားများမှာ ပုဆိုးအမဲနဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တဦးအဖြစ် တွေ့ဖူးပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ မင်းကိုနိုင်တို့က ဗကသ ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှာဆက်နေ သူက မြေပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်ချာတိတ် ကြောင်ကြီးလည်း လူ့ဘောင်သစ်နောက် ယောင်ဝါးဝါးလိုက်ခဲ့ ဖူးပါတယ်။ ယောင်ဝါးဝါးဆိုတာက အခြားမဟုတ်ပါဘူး၊ သူတို့က တကဲ့ဖိုက်တာများ ဖြစ်လို့ပါ။ အန်အယ်လ်ဒီ လူငယ်များနဲ့မတူဘဲ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ဖို့ မြေပေါ်မြေအောက် ဖွဲ့စည်းထား၊ တောတွင်း လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိထားတာပါ။ ၈၉ခုနှစ် အာရ်အိုင်တီကျောင်း ပရဝုဏ်မှာပြုလုပ်တဲ့ ကိုဘုန်းမော် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားကို သူတို့လုပ်တာထင်တယ်။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး သံတိုင်အလယ်ခြားပြီး ကျနော်တို့တွေက ကမာ္ဘမကြေသီချင်း၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ သီချင်းဆို၊ ထရပ်ကားပေါ်ကနေ လုံထိန်းတပ်က လော်စပီကာနဲ့ လူစုခွဲ့ဖို့အမိန့်ပေး သူပြိုင်ငါပြိုင် ကြဲကြတာ အမှတ်ရနေမိတယ်။
ပါတီဝင်အင်အား သိန်းချီရှိလို့ အန်အယ်လ်ဒီပြီးရင် ဒုတိယအင်အားအကြီးမားဆုံး အတိုက်အခံပါတီအဖွဲ့လို့ ကြွေးကျော်ဖူးတာ မှတ်မိပါတယ်။ ပါတီမဖျက်သိမ်းခံရခင် အထိ ရန်ကင်းကျောက်ကုန်းမှာ ဌာနချုပ်ရုံးရှိပါတယ်။ ကိုမိုးသီးကတော့ အစောပိုင်းကထဲက တောခိုသွားပါပြီ။ သူတောမခိုခင် တက္ကသိုလ်မှာ ဒေါင်းအလံဆိုက်ဖို့ ပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုလား ဘာလား ရေးသွားခဲ့တဲ့ ကဗျာလေး ထင်ရှားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တဝိုက်မှာပဲ သူ့ကို ဝေဖန်ပြီး ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကို သပ်လျှိုဖြိုခွဲတဲ့ တန်ပြန်ထောက်လှမ်ရေးများလက်ချက်လို့ ယူဆရတဲ့ မိုးသီးဇွန် (ခ) ကြိုးမဲ့လေတံခွန် စာတမ်းလည်း ထွက်နေပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျောက်ကုန်းက ဌာနချုပ်မှာ ကျောင်းသားအဖွဲ့ပေါင်းစုံ အစည်းအဝေးများ ကျင်းပရာ နေရာဖြစ်လို့ ရောက်ဖူးပါတယ်။ ရှေ့နေရာမှာ စားပွဲကုလာထိုင်နဲ့ အလံခင်းပြီး ရုံးခန်းလုပ်၊ နောက်ဖက်အခန်း အမှောင်ထဲမှာ ကျောင်းသား အစည်းအဝေးပွဲ ပေါင်းစုံလုပ်ကြ၊ အယူဝါဒအရေး အတွေးအမြင်များ ဖလှယ်ကြလုပ်ကြပါတယ်။ သို့နောက် ကျနော်နောက်ဆုံး တချိန်ရောက်ချိန်မှာတော့ လူဟောင်းများလည်း မရှိတော့၊ ပါတီဆိုတာလည်း ခေါင်း ခြေလက်များအားလုံး အဖျက်ခံလိုက်ရပြီး အမည်ခံ သဘောလောက်သာ မသေမရှင် ကျန်ပါတော့တယ်။ သူ့ကိုယ်မယုံ ကိုယ့်သူမယုံ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများအားလုံး ဖြတ်တောက် ခံလိုက်ပါပြီ။
ကိုမိုးသီးတောထဲ ထွက်သွားပြီး အစောပိုင်းကာလ ကျန်လူများ ဆက်လက်တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲနေစဉ် တချိန်မှာ ကျနော်ဌာနချုပ် ကျောင်းသားအစည်းအဝေးတခု တက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ စပိုင်လို့ ယူဆရသူတဦးက ကိုမိုးသီး မြို့ပေါ်ပြန်ဝင်လာတာ မင်းသိလားလို့ ကျနော့်ကိုမေးတယ်။ ကိုမိုးသီး တကယ်ပဲ မြို့ပေါ်ဝင်လာခဲ့သလား၊ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ဝင်ခဲ့သလဲ၊ ဘယ်အထိရောက်ခဲ့သလဲ၊ တကယ်ပဲလား သူပဲသိပါမယ်။ အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် ဥက္ကဌကိုသံခဲ မြို့ပေါ်တက်လာပြီး ဧည့်စာရင်းတောင် ခပ်တည်တည်နဲ့ အစစ်ခံသွားတယ်ဆိုတာတော့ ကြားဖူး နားဝရှိထားတယ်။ တချိန်မှာ ဖတ်ကောင်းအုံးမည့် ရင်ထိတ်သဲဖို ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းများ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲတုန်းက ပြောကြတာ မိုးသီးဇွန်ဆိုတာ သူ့အမည်အရင်း ပေးချင်တဲ့ နာမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ ၁၉၈၈ခုနှစ် ဇွန်လ လှုပ်ရှားမှုတခုမှာ သူမိန့်ခွန်းတက်ဟောတော့ ပြောလိုက်တဲ့နာမည် တမျိုး (မမှတ်မိတော့ပါ) ဖြစ်ပေမဲ့ စင်အောက်မှ ကြားသူများက မသဲမကွဲနဲ့ မိုးတွင်း ဇွန်လလည်းဖြစ်တာမို့ မိုးသီးဇွန်လို့ အမည်တွင်ကြောင်း မှတ်ဖူးပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင် သို့ နီးစပ်သူများပဲ သိပါမယ်။ တခု ထူးဆန်းတာ အခြားခေါင်းဆောင်များ အကြိမ်ကြိမ် ထောင်တန်းအချုပ်ကြဖူးပေမဲ့ ကိုမိုးသီးတယောက် တခါမှ အဖမ်းမခံရဘူး ထင်တယ်။ သူရေးတဲ့ ပို့စ်တပုဒ်မှာ ဖတ်ဖူးတာ နောက်ကလိုက်လို့ ဘတ်စ်ကားပေါ်တက်ပြေးတော့ လိုက်ဖမ်းသူများ ကားပေါ်တက် ရှာပေမဲ့ သူ့ကိုသတိမမူမိဘဲ ကျော်သွားတယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။
ကိုမိုးသီးဝက်ဆိုက်မှာ ကိုယ်တိုင်ရေး ပို့စ်တပုဒ်တွေ့လို့ စာဖတ်သူများ လေ့လာကောင်းစရာများ ပါနိုင်တယ် ထင်လို့ ပူးတွဲတင်လိုက်ပါတယ်။ အမှတ်တမ်း အတင်ခံ ကိုယ်တိုင်ရေးတာမို့ အချက်အလက် တမင်တကာ လွဲနိုင်စရာမရှိ ယူဆလို့ပါ။
မှတ်ချက်။ ဤအထိ ရေးသားချက်များသည် ကျနော့်၏ ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်များ သာဖြစ်ပါကြောင်း။
ကိုုမိုုးသီး နဲ့နေ ့သစ် အင်တာဗျူး
နေ ့သစ်- ကိုုမိုုးသီးခင်ဗျား ကိုု တိုုက်ခိုုက်ထားတယ်။ ငွေကိစ္စ၊လူသတ်မှုကိစ္စနဲ့ခင်ဗျားအကြောင်းကိုု သိနေတဲ့ကျနော်တိုု ့က စိုုးရိမ်တယ်။ ကိုုမိုုးသီးရဲ့သမိုုင်းကြောင်းကိုုလေးစားတဲ့ သူတွေက စိုုးရိမ်မကင်းနဲ ့ကျနော်တုို ့ကိုုမေးလာကြတယ်။ နောက်ပြီးတော့အခုုကာလက ခင်ဗျားက တိုုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်ကြိုးပန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ကာလဆိုုတော့ ဒါကိုု မနာလိုုတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့အဖျက်အမှောက်တွေရှိနေတယ်။ ဒီကိစ္စတွေကိုု ခင်ဗျားဘာပြန်ပြောချင်သလဲ။
မိုုးသီး- ကြေးစည်သံကြားတော့ခွေးတွေအူတာပေါ့လေ။ ကောင်းမှုကိုုသာဓုုမခေါ်နိင်ဘူးပေါ့။
ခွေးဟောင်တိုုင်းထကြည့်ရင် အိပ်ရေးပျက်ယုုံရှိမပေါ့။ ကဲပါလေ လိုုရင်းပဲပြောကြတာပေါ့။
ပီနန်ဆရာတော်ဘုုရားကြီးက ကျနော်ကိုုသိပ်ချစ်ခင်ပါတယ်။ ကျနော်ကလဲ သူကိုုလေးစားကြည်ညိုတယ်။ ဆရာတော်ကြီးကိုုလေးစားကြည်ညိုရတဲ့အကြောင်းကတော့
ဆရာတော်ဘုုရားကြီးရဲ့အမြင်ကျယ်တဲ့ တိုုးတက်တဲ့ အမြင်တွေကိုု တခါဖူးတိုုင်းတခါကြားရတယ်။ ဟိုုတလောက ကျနော် တိုု ့နယူးယောက်ကမိတ်ဆွေတယောက်နဲ ့ဆွမ်းကပ်ဖြစ်သေးတယ်။
၂၀၀ရ ခုုနစ်သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်တော့ ကျနော်ကိုုပီနန်လာဦးဆိုုလိုု ့ကျနော်သွားရပါတယ်။
ဘာတွေဖြစ်နေလဲ။ ဘာတွေလုုပ်နေလဲမေးမယ်။ ကျနော်ပြန်လည်တင်ပြခဲ့တယ်။
သူက ရံပုုံငွေလှူ ဒါန်းပါတယ်။ ငွေဘယ်လောက်လှူ သလဲ ။ ဒီငွေတွေကိုု ကျနော်က အဖွဲ ကိုု ပြန်အပ်ရပါတယ်။ အဖွဲ ့ကတော့ People Action Committee –PAC လိုု ့ခေါ်ပါတယ်။
တခြားလူတွေလည်းအများကြီးပဲ ကျနော်တုို ့ကိုုပေးကြတယ်။ လျူကြတယ်။
ဘဏ်ရေးမှုတွေဖြစ်တဲ့ ဆရာတော်ဦးဇဝန၊ ဒေါက်တာလွမ်းဆွေ၊ မကြည်ကြည်ခင် တိုု ့ကိုုမေးနိင်ပါတယ်။ အဖွဲ ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ကိုုသံဒုုတ်၊ကိုုမင်းဇော်၊ စောလုုံလုုံ တိုု ့ကိုုမေးရင် သိနိင်ပါတယ်။ ဒေါက်တာလွမ်းဆွေ ဘလောက်တိုု ့အီးမေးလ်တိုု ့လဲလူတိုုင်းသိနေတာပဲ လှမ်းမေးလိုုက်နိင်ပါတယ်။ ဒီရဲဘော်တွေကအလွန် စိတ်ချရတဲ့ရဲဘော်တွေပါ။ ငွေတွေကျန်သေးတယ်လုို ့တောင်သိရတယ်။
သူကိုုတာဝန်ယူထိမ်းသိမ်းကြရတဲ့ ကိုုဝင်းနိင်ဦး၊ကိုုဆလိုုင်း၊ကိုုကျော်ကိုုကိုုဝင်း တိုု ့ကိုု မေးမြန်းနိင်ကြပါတယ်။ တခြားရဲဘော်တွေလဲအများကြီးရှိသေးတယ်။ ကျနော်လည်းသတ်ဖိုု ့အမိန် မပေးဘူး။ ဒီရဲဘော်တွေကလဲ ဒီလိုုမျိုးမလုုပ်ဘူး။ သူတိုု ့ရဲ့လေးစားစရာကောင်းတဲ့အရည်အသွေးတွေကိုုသူတိုု ့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတိုုင်းသိကြပါတယ်။
တော်ထဲမှာကိုုယ်ကိုုသတ်သေတဲ့ရဲဘော်တွေ ၄ ၊ ၅ ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။ လူဟာအကျဉ်းအကြပ်ထဲကြသွားတဲ့အခါမှာ ဖြစ်တတ်လေ့ရှိတာတွေပါ။
ဘယ်သူကိုုမှာလာကြလုို့ကျနော်တိုု ့မခေါ်ခဲ့ကြဘူး။ ကိုုယ်အသိစိတ်နဲ့ကိုုယ်လာတယ်။
တော်လှန်ရေးတရပ်မှာဘာတွေကြုံနိင်တယ်။ ဘာတွေဖြစ်နိင်တယ်ဆိုုတာ အားလုုံးသိကြတာပဲ။ နိင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမိုုင်းတွေကိုုကြည့်ရင် တော်တော်ကိုုစိုုးစိုုးဝါးဝါးတွေဖြစ်ကြလေ့ရှိတယ်။ တော်လှန်ရေးတိုု ့ရဲ့မိခင်ကြီးဖြစ်တဲ့
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးကြီး ကနေ အမေရိကန်တော်လှန်ရေး၊ ရုုရှားအလယ်၊ တရုုပ်၊ဗီယက်နမ်၊
ညီအကိုုချင်းတောင်သတ်ခဲ့ကြ၊သားအဖချင်းသတ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ The revolution devours its own children လိုု ့တောင် ဆိုုစကားအဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ ကျနော်ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်မှာ အဖိတ်အစင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကျနော်မှာတာဝန်ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ကျနော်တိုု ့သတ်ဖိုု ့အမိန်မပေးခဲ့ဘူးဆိုုတာ ရဲဘော်တိုုင်းသိတယ်။ ကိုုယ်လိပ်ပြာကိုုယ်လုုံဖိုု ့အရေးကြီးတယ်။
ကျနော်ဘဝမှာ ဗိုုလ်ချုပ်ခင်ညွန် ့ထောက်လှမ်းရေး အုုပ်စုုတွေနဲ့ခင်းခဲ့ရတဲ့စစ်ပွဲကအရှည်ကြာဆုုံး အခက်ခဲဆုုံး။ သူတိုု ့ကျနော်ကိုုတိုုက်ခိုုက်တာမှာရစရာမရှိဘူး
တော်လှန်ရေးကြီးကိုု အစအဆုုံးမမှီတဲ့ကလေးတွေ၊ တချို ့လူတွေတော့ ဒါတွေကိုုမသိကြဘူးပေါ့။ အခုုခေတ်လိုု ဖေစ်ဘုုတ်မပေါ်သေးဘူး။ အင်တာနက်မီဒီယာမပေါ်သေးဘူး။ မြက်ခင်းသစ်ဆိုုတဲ့ မဂဇင်းကိုု ဗိုုလ်ချုပ်ခင်ညွန် ့ကိုုတိုုင်း
ဦးဆောင်ပြီး ကြီးကြပ်ထုုတ်ဝေတယ်။ ဒီထဲမှာ ကျနော်ကိုု တိုုက်ခိုုက်ထားတာတွေက
လူသတ်ကောင်၊မုုဒိန်းကောင်၊ မိန်းမလိုုက်စားသူ၊ ငွေအလွဲသုုံးစား စတာတွေပေါ့ ။ ဓါတ်ပုုံတွေကာတွန်းတွေဝေဝေဆာဆာပေါ့။ ဒီစာအုုပ်ကိုုလစဉ်ထုုတ်တယ်။ ဝေတယ်။
အမေရိကန်နဲ့အင်္ဂလန် က တချိုု့ ဖုုန်းကြီးကျောင်းတော်တော်များများ မှာတောင်ဒီစာအုုပ်တွေကိုု ဖြန် ့ဝေပေးကြတယ်။ အသံလွင့်ဇတ်တွေလုုပ်တယ်။
ကျနော့်ကိုုလူဆိုုးနေရာထားပြီး ရုုပ်ရှင် နှစ်ကားရိုုက်တယ်။ တကားက ပါပီမဆိုုတဲ့ကား
ကျနော်လေးစားတဲ့ ချစ်ခင်တဲ့ စိုုင်းထီးဆိုုင် ကျနော်ကိုုတိုုက်ခိုုက်တဲ့အထဲမှာ ဝင်ပြီးဝါဒဖြန် ့ပေးခဲ့ရသေးတယ်။ ကျနော်သူကိုုမေတ္တမပျက်ပါဘူး။
ငယ်ငယ်က ရုုပ်ရှင်မင်းသားကြီး ညွန် ့ဝင်းကိုု ကျနော်သဘောကျတယ်။ သူရိုုက်တဲ့
ဗန်တိုုလူလေးနဲ့သူဇာ ဆိုုတဲ့ဇတ်ကားကိုုခုုထိမှတ်မိသေးတယ်။ ၈၈ ဖြစ်တော့ သူက လူထုုဖက်မရပ်တည်ဘူး။ ကျောင်းသားလေးတွေသူ ခြံထဲဝင်ပုုန်းတာကိုု မောင်းထုုတ်တယ်။
ကလေးတွေအဖမ်းခံရ အနိပ်စက်ခံရတွေဖြစ်ကုုန်တယ်။ နောက်တော ့ဗိုုလ်ချုပ်ခင်ညွန် ့က စည်းရုုံးပြီး သူကိုုရုုပ်ရှင်ရိုုက်ခိုုင်းတယ်။ လူဆိုုးကြီး မိုုးသီး ကိုု သူကဦးဆောင်ပြီးနိမ်နင်းတယ်။
ရုုပ်ရှင် ထဲမှာ ညွန် ့ဝင်း ပြစ်လိုုက်တဲ့ကျည်ဆံနဲ ့ကျနော်ကသေ၊အလောင်းရေထဲမျော်ပေါ့။
ကျနော်ညွန် ့ဝင်းကိုုမေတ္တာမပျက်ပါဘူး။ ပြည်သူကတော့သူကိုုမုုန်းသွားတယ်။
ကျနော်တိုု ဘဝမှာ ဗိုုလ်ချုပ်ခင်ညွန် ့နဲ့အပြန်အလှန် စစ်ခင်းတဲ့ပွဲကအခက်ခဲဆုုံးပဲ။ သူလက်ချက်နဲ့အေဘီကွဲ၊ ကရင်နှစ်ဖွဲ ့ကွဲ ။မနပုုလောကျဆိုုတော့
ကျနော်သူကို ကိုုင်တွယ်ဖိုု့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ ၄ နှစ်လောက်ချိန်ယူလုုပ်ခဲ့ကြတာ။
အမေရိကန် က အသင်းတော်ကြီးတခုုကလဲ ငွေကူရှာပါတယ်။ တန်ပြန်စစ်ဆင်ရေးလုုပ်ခဲ့ရသပေ့ါ။ တချိန်ကြရင်တော့အသေးစိတ်ကိုု ကျနော်စာအုုပ်ရေးပါမယ်။
တခါ မနပုုလောကျသွားတော့။ ကျနော်တိုု ့တပ်တွေဟိုုး မြန်မာပြည်တောင်ပိုုင်းကိုုဆုုတ်ရတယ်။ ၉ ၅ ခုုနစ်လောက်ပေ့ါ။ ရဲဘော် ၃ ထောင်လောက်။
စားစရာရိက္ခာကုုန်သွားတယ်။ တောကြီးကတောတောနက်တယ်။ သေမင်းတောင်မတွေ ့နိင်တော့ဘူးလိုု ့ရဲဘော်တွေပြောကြတယ်။ မိုုးကကောင်းလုိုက်တာ တနစ်လုုံးရွာနေတယ်။ ဆင်ရိုုင်းတွေအကောင်တထောင်ကျော်ရှိတယ်။
ကျားတွေလဲရှိတယ်။ ကျနော်တိုု ့ဒီနေရာကိုုရောက်သွားတယ်။ တောထဲမှာ ပြန်လည်အသက်ရှင်နိင်ဖုို့ပင်လယ်ထဲမှာစစ်ဆင်ရေး စလုုပ်ရတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ ငါးခိုုးဖမ်းနေတဲ့ ထိုုင်းငါးဖမ်းလှေတွေကိုု ဓမြတိုုက်ကြရတာပေါ့ဗျာ။ ဒီလုုပ်ငန်းမှာဆိုုမားလီးယားတွေက ကျနော်တိုု ့ထက်နောက်ကြတာပေါ့။
့ ထိုုင်းအာဏာပိုုင်တွေ ထဲမှာလဲ ငါးဖမ်းလုုပ်ငန်းမှာ တော်တော်ပါထားကြတယ်။
ဒီတော့ အာဏာပိုုင်တွေရော၊ လူဆိုုးဂိုုဏ်းတွေနဲ့ရော စစ်ခင်းကြရတော့တာပေါ့။
ကျနော်ဓါတ်ပုုံတွေကိုု ဒွန်မောင်းလေဆိပ်ကနေ နယ်ခြား ရဲစခန်းမှန်သမျှချိတ်ထားတယ်။
အလိုုရှိတယ်ပေါ့။ ဒီတုုန်းကလောက်အန္တရယ်များခဲ့တာ ကျနော်ဘဝမှ မရှိခဲ့ဘူး။
ရှေ ့ကရန်သူနဲ့တိုုက်နောက်က ထိုုင်း လူဆိုုးအဖွဲ ့ပေါင်းစုုံနဲ့ဆော်ပေါ့။ သူတိုု ့ငါးဖမ်းသဘောင်္အစီး တဒါဇင်လောက်နှစ်မြှုုပ်လိုုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ ဒီစစ်ပွဲမှာ
ကျနော်တိုု ့အနိင်ရခဲ့တယ်။ထိုုင်းငါဖမ်းလုုပ်ငန်းရှင်တွေက ယဉ်ကျေးပါတယ်။
တလကိုု ဒေါ်လာ တသိန်းလောက် လာပေးပြီး စစ်ပြေငြိမ်းကြရပေါ့။
ကျနော်တိုု ့လည်း ရိက္ခာတွေ၊လက်နက်၊ဆေးဝါးတွေ ပြည့်ပြည့်စုုံစုုံပြန်ဖြစ်တယ်။
ကျနော်ဆိုုလိုုခြင်တာကတော့ ကျနော်ဟာ ကိုုယ်အကျိုးတွက်လုုပ်ခဲ့တာမရှိဘူး။
ဒါကြောင့် ဘာကိုုမှာ ကျနော်မကြောက်ဘူး။ ကျနော်တိုု ့မြန်မာပြည်သူတွေ အဖိနိ်ပ်ခံဘဝကလွတ်မြောက်ဖိုု့ဘယ်လိုုခြိမ်းခြောက်မှုကိုုမှ ကျနော်ဟာတုုန်လှုပ်ခဲ့ပါဘူး။
ကျနော်အခက်ခဲဆုုံး အကြမ်းတမ်းဆုုံးအချိန်မှာ ကျနော်နဲ့အတူ တသားတည်းရပ်တည်ခဲ့ကြတဲ့ ကိုုအောင်သူ၊ ကိုုဝင်းမင်း၊ ကိုုဝင်းနိင်ဦး ၊ ကိုုအောင်နိင်ဦး၊ကိုုကျော်ကိုု၊ ကိုုဆလိုုင်း တိုု ့နဲ့တကွ ရဘော်အပေါင်းကိုု မှတ်တမ်းတင်ဂုုဏ်ပြုပါတယ်။
ကိုကြောင်ကြီး….. အဟဲ၊ ကျွန်တော်နဲ့ အသက်သိပ်ကွာမယ်မထင်ဘူး! ကျွန်တော်လဲ လမ်းမတော် စဉ်အိုးတန်းလမ်းထိပ်က လူ့ဘောင်သစ်ရုံးမှာ ယောင်တောင်ပေါင်တောင် လုပ်အားပေးဘူးသဗျ။ “မိုးသီးဇွန်” ဆိုတာ သူ့ရေးတဲ့ ကဗျာရဲ့ နာမည်လို့ မှတ်ထားဘူးတယ်။ ထောက်ပြုတ် တစ်ယောက်ပြောဘူးတာတော့ အပြင်ကသူတွေထဲမှာ သူတို့လန့်တာ ကိုမိုးသီး ဘဲရှိတာတဲ့။ မှတ်မိတာတော့ ဒါဝတ်ဂျမားက သူတို့ ပါတီနဲ့ ပေါင်းဘို့ အလှူငွေ သိန်း၂ဝ (၁၉၈၉ ခုနှစ်) နဲ့ ကမ်းလှမ်းတာကို လူ့ဘောင်သစ်က တစ်ယောက်တစ်ကျပ် စုရင် ဒီထက်ပိုပါတယ်ပြောပြီး ငြင်းလိုက်တာပါဘဲ။ သူ့အကြောင်း ပြောစရာ အများသားဗျ….
အဲဒီတုန်းကနာမည်ကြီးတဲ့ဖိုးသင်္ကြန်ဆိုတာကရော ဘယ်သူလဲဗျ
သတင်းစာမှာ ဝါဒဖြန် ့ရေးထားတာတွေ ့ဖူးလို ့
နောက်ပိုင်း ကိစ္စတော့ မသိဘူး ။
စစ်အစိုးရကို တောခိုတော်လှန်ရဲတာ တစ်ခုထဲနှင့် ၊
သူ့ရဲ့ သတ္တိ နှင့် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ခဲ့မှုကို လေးစားပါတယ် ။
တောခို၊ တော်လှန်၊ တိုက်ခိုက်၊ စည်းရုံး၊ လှုပ်ရှား…နောက်ပိုင်းကျတော့ လုပ်စား သွားပြီး မြန်မာပြည်အတွက်ပါလို့ အော်၊ ရသမျှဘုံး။ အချီကြီး ပွ သွားသူတွေ။ ဆွေမျိုး မှန်သမျှ တတိယ .နိုင်ငံတွေဆီပို့။ ၂ ယောက်က်ို ၃ ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရာထူးပေး၊ လခတွေယူ ၊ နိုင်ငံရေး ကိုလုပ်စားနေသူတစ်ချို့ကြောင့် ….:P
တစ်ပြည်လုံး အသွေးအသားတွေ။ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်နေချိန်မှာ ။ ဒေါ်လာစား ဘဝနဲ့ ငြိမ်ငြိမ်နေပြီး ပြည်ပက အော်နေတဲ့လူ…အခုတော့ ဒီမိုခေါ်င်ဆောင်ဆိုပြီး ပြန်လာပြီးပေါ့..။ ငါတို့ ပြည်တွင်းမှာ အသေအလဲဒုက္ခတွေခံ ထောင်တွေအကြိမ်ကြိမ်ရောက်…။ ဆင်းရဲဒုက္ခတစ်ပွေတစ်ပိုက်နဲ့..အာဏာရှင် ဖိနပ်အောက်ရောက်အကြိမ်ကြိမ်အနင်း ခံ …။ ကိုယ်ကျိုး စီးပွားအတွက်မဟုတ်ဘဲ မိသားစုဘဝတွေ ပြိုပြိုလှဲခဲ့…ဒင်းကတော့..။ တောက်…စ်…..
အခုမှပဲ ကိုယ်ငယ်ငယ်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကို တဖြေးဖြေးနဲ ့နားလည်မိတော့တယ်ဗျို ့
ကိုမိုးသီးဇွန်တောင် ပြန်လာတယ်ဆိုမှတော့ ကိုကြောင်ကြီးလဲ ပြန်လာသင့်ပါပြီလို ့
အဲဒါ….. အဲဒါ ( credit to သဂျီး )
ပြည်တော်ပြန် မိုးသီးဇွန်အား မြန်မာမွတ်ဆလင်နိုးကြားရေးကွန်ယက်မှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏ တဲ့။
ဘင်္ဂင်္ွလီရှေ့နေကြီးကို ဘင်္ဂါလီတွေက ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုကြတာပါ။
မိုးသီးဇွန် မြန်မာပြည်ပြန်လာတာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအပါအဝင် မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ကောင်
်း ကျိုးမရှိပါဘူး။ ဘင်္ဂါလီတွေအတွက်ကတော့ သူတို့အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ပေးမဲ့ ဘင်္ဂါလီရှေ့နေကြီး ပြည်တွင်းရောက်လာတာ အားတက်စရာပေါ့။
ဇာတ်တူသားစားပြီး ကိုယ့်ရဲဘော်တွေကို ကွန်မြူနစ်က အလေးပြုရလောက်အောင် ရက်ရက်စက်စက်သတ်သူတွေကို ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ကြီးဆိုပြီး ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ကြိုဆိုသူတွေကိုတွေ့ရတာ စိတ်မသက်သာပါ။
ဒီလူတွေ ပြန်လာတာ ပြည်တွင်းက ၈၈ခေါင်းဆောင်များကို သိက္ခာကျစေပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာခေါ် ဘင်္ဂါလီကို အားပေးတဲ့ မြန်မာလူမျိုးသစ္စာဖောက်နိုင်ငံရေးသမားတွေ
ပြည်ပမီဒီယာသမားတွေထဲမှာ ကိုမိုးသီးလည်း ရှေ့ဆုံးကနေပါပါတယ်။
အောက်က လင့်ကလေးကတော့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို ကိုမိုးသီး ဖိနပ်နဲ့ပေါက်ခဲ့တာပါ။အဲဒီခွေထဲမှာ ကိုမိုးသီးအပေါင်းပါ မိန်းမများက ငါးစိမ်းသည်ငိုလောက်အောင် ကိုယ့်တန်ဆာနဲ့နှိုင်းပြီး ဆဲထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ခုတော့ ကိုမိုးသီးလည်း ကိုယ်ဖိနပ်နဲ့ပေါက်ခဲ့တဲ့ သမ္မတကို ဝမ်စွေ့လုပ်ဖို့ပြန်လာပါပြီ။
မိုးသီးဇွန်နာမည်ဆိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကဘဲကြားဖူးတယ်။လူဆိုးသူခိုး ၊လူသတ်သမား၊ခုတော့ လာကြိုတာ
သေးလည်းမသိဘူး။နိုင်ငံ ရှုပ်တယ်၊မြန်မာပြည်ထဲရောက်ရင် သူအာဏာရရေးအတွက် သွေးထိုးမယ်၊
(((ဇာတ်တူသားစားပြီး ကိုယ့်ရဲဘော်တွေကို ကွန်မြူနစ်က အလေးပြုရလောက်အောင် ရက်ရက်စက်စက်သတ်သူတွေကို ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ကြီးဆိုပြီး ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ကြိုဆိုသူတွေကိုတွေ့ရတာ စိတ်မသက်သာပါ။)))
ကိုRကြီးရေ..။ မြောက်ပိုင်းလူသတ်မှုကိစ္စကို အခုဝင်လာတဲ့ သူတွေ ဘယ်လိုရှင်းကြမှာလဲ၊ ဘယ်သူတာဝန်ခံပြီး ဘယ်လိုပြောကြမလဲ သိချင်သား..။ အစိုးရကလဲ သူတို့ သိပေမယ့် ဒီမတရားမှုကို ဖော်ထုတ်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက သူတို့အဖွဲ့ထဲမှာ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုပြီး အငြိုငြင်မခံပဲ လက်ခံပေးမှာပဲ။
ရီစရာတော့ ကောင်းနေပြီ။ အဘယ်ကြောင့် မြောက်ပိုင်းမှာဝင်မွှေသွားတဲ့ ငထောက်များ ဇတ်လမ်းထဲမပါ ပါသလဲ၊ ဘာကြောင့် Ronald အောင်နိုင်ကရော မပါ ပါသလဲလို့! မြသန်းစံရဲ့ “ပါပီမ” ဇတ်လမ်းတွဲ အောင်မြင်သဗျ! ဘာလို့များ ၁ တရားခံ ထောက်/ဟောင်း များမပါပါလိမ့်?
ကိုကြောင်ကြီး, ခင်ဗျား Post မှာ ကျွန်တော်တော့ အသက်ကြီးမှ အဆဲခံရအုံးမယ်။
ပါSorry မြောက်ပိုင်းကိစ္စ ပြန်ဖော်ကြလို့ပါ။ ကိုမိုးသီးကိုကာကွယ်ချင်လို့ မဟုတ်ရပါ။
ကိုမိုးသီးကို မည်သည့်မှတ်ချက်မှ မပေးလိုပါ။ ဒါပေမယ့် အခုပြန်ဝင်လာတဲ့ သူတွေထဲက သက်ဆိုင်သူတွေသိပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လောက်မိုက်ရိုင်းလဲ၊ သတ်ရင်တောင် လူကို လူလိုသတ်ပါ။ ဒါနောက်ဆုံးစကားပဲ။ အဆုံးစွန် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးမှ သတ်မိန့်ပေးတာ ဘယ်သူလဲလို့ သေချာ မေးလိုက်ကြစမ်းပါ။
ကျောင်းသားတပ်မတော် မြောက်ပိုင်း (ကချင်)နဲ့ ဗဟို သို့မဟုတ် တောင်ပိုင်း (ကရင်) နှစ်ဖွဲ့ ရှိတာ မမေ့ပါနဲ့။ အဲဒီအချိန်က မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်း နှစ်ဖွဲ့အကြား ဆက်သွယ်ရေး အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ ကျောင်းသားဆိုတာကလွဲလို့ ကေအိုင်အေနဲ့ ကေအန်ယူလို့ သီးခြားနှစ်ဖွဲ့ သဘောဖြစ်နေပုံရပါတယ်။ အခြေခံဒေသ တည်ဆောက်ပုံခြင်း မတူပါဘူး။ ယခုရောက်လာတဲ့ အေဘီခေါင်းဆောင်ဟောင်းများသည် ဗဟို (ကရင်)မှဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ ခေါင်းရှောင်လို့ မရပေမဲ့ တကယ်တမ်း အကြပ်အတည်း အဖွဲ့အတွင်းမှာလည်း ရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်၊ စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ကိုလည်း အလူးအလဲခံနေရချိန်မျိုးဆိုတာလည်း ထည့်တွက်ရပါမယ်။ ကိုကျောက်ခဲပြောသလို ဝင်မွှေသွားတဲ့ တန်ပြန်ထောက်လှမ်းရေးများ ကြားကပျောက်နေတာ စိတ်မကောင်းစရာပါ။ မီးလောင်ရာလေပင့်ဆိုသလို ဒင်းတို့လက်ချက် အတော်များများပါမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ မြေပေါ်နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများမှာလည်း သူတို့ပဲ ခလောက်ဆန်ကောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ စာဖတ်သူများအနေနဲ့ အပြင်ကနေ ဝေဖန်လို့ကောင်းပေဲ့ ထောင်နှုတ်ခမ်းဝ လမ်းလျောက်နေရသူများအဖို့ ပေါ့ပေါ့သေးသေး ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး၊ တောထဲမှာ လက်နက်ကိုင် တိုက်နေရသူများအဖို့တော့ သေရေးရှင်ရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်သူ နဝတစစ်ဗိုလ်များကို စေ့စပ်ရေးလို့ ပြောဆိုလက်ခံနိုင်ရင် ကိုယ့်အချင်းချင်းကိုလည်း နားလည်ခွင့်လွှတ်နိုင်ရပါမယ်။ နို့မိုရင် တရားစွဲမယ် ရုံးတင်မယ် ပြောနေဂျသူများ မြန်မာပြည်ပြန် မလာကြဘဲ စစ်တပ်ကို ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြပါလို့ အကြံပေးပါရစေ..။
ကိုမိုးသီးဇွန် အကြောင်း သေချာ မသိပါဘူး ။ သိသူများကတော့ ကိုမင်းကိုနိုင် ကိုကိုကြီးတို့လောက် impression မရှိကြတဲ့ အပြင် နှာခေါင်းရှုံ့သူများပါတယ် ။
အခု ဦးကြောင် စာထဲ ပါတဲ့ အချက်ကတော့ ကျွန်တော့်အဖို့တော့ နှာခေါင်းရှုံ့မိပါသည်။
သူတိုု ့ငါးဖမ်းသဘောင်္အစီး တဒါဇင်လောက်နှစ်မြှုုပ်လိုုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ ဒီစစ်ပွဲမှာ
စစ်တပ်နဲ့ ဘာမှ မကွာတော့ပါလား .. ဆက်ကြေးယူ ၊ဓမြတိုက်တယ် ဆိုတာ ဘယ်နိုင်ငံသားကိုဘဲလုပ်လုပ် အရသာခံပြော တာ နဲ့တင် ..
သူ ဘယ်လိုများ လုပ်ခဲ့လို့ ပါလိမ့် ။ ဟုတ်ခဲ့ ရင်တောင် ကြွားလွန်း လှတယ် ။
ဦးခင်ညွှန့် ထောက်လှမ်းရေး ကျဆုံးရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းက သူ့လူတွေ မောက်မာလွန်း အားကြီးတာ က အဓိကလို့ မြင်ပါတယ် ။ ထောက်လှမ်းရေးတပ်ရင်မှုး လောက်က တိုင်းမှုးတွေ ကို အရေးမစိုက် မောက်မာခဲ့လို့ ငြိကြတာလို့ သာ မြင်ခဲ့ပါတယ် ။
ဝူး ..ဒီလိုလူတွေပြန်လာတာ .. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တော့ အတော် ခေါင်းခြောက်ရဦးမယ် နဲ့တူတယ် ။
နင်ငတ်တော့မှ နင့်အောက်မှာ ကျွေးစရာမွေးစရာ တပြုံကြီးရှိနေတော့မှ ကိုယ်ချင်းစာတတ်လိမ့်မယ် ကထူးဆန်းရေ…။ စားစရာမရှိလို့ အမှိုက်ပုံရှာဖွေစားနေရသူကို အောက်တန်းကြလှချည်လားလို့ မပြောနဲ့။ တောထဲမှာ ဥပဒေဆိုတာ မရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်မို့ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကို နောက်ဆုံးရဲ့နောက်ဆုံး လမ်းကြောင်းအဖြစ် အမျှော်အမြင်ကြီးသူများ စဉ်းစားကြတာ…။
ဒီလုုပ်ငန်းမှာဆိုုမားလီးယားတွေက ကျနော်တိုု ့ထက်နောက်ကြတာပေါ့။
ကိုယ်ချင်းစာချင်စိတ်ပျောက်အောင် ဂုဏ်ယူနေတော့လည်း ………
အခုမှ နားထောင်မိတာ .. ကိုမိုးသီးဇွန်ကတော့ အမျှော်အမြင်ကြီးတော့ ဒါးလှံ လက်နက် စုဆောင်းခိုင်းနေပါလား ဦးကြောင်ရေ ..
ကထူးဆန်း ရေ ။
အဲဒီ VDO က အတုကြီးပါ ။
ရခိုင် အရေးအခင်း မဖြစ်ခင် ၊
ဟိုးအရင် ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးတုန်းက ၊
ဖြတ်ညှပ်ကပ် လုပ်ထားတာပါ ။
မြန်မာပြည်က လူများစု ခမျာ ၊
အတုတွေ ကြားထဲမှာ ၊
ဘင်္ဂါလီ ကိစ္စမှာလည်း ၊
သမ္မတကြီးရဲ့ သဝါဏ်လွှာ ၊
တကယ့် အဖြစ်အပျက် ၊
ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာ ၊
နဲနဲ ရိပ်မိလာကြတာပါ ။
ဒီ vdo အတုဆိုတာ ဟုတ်တယ်ဆိုရင်လက်ခံလိုက်ပါ့မယ် ။ (vdo တင်သူကိုတော့ ချီးကျူးပါတယ် ။ တော်တော့်ကို ပိရိတယ် . ဘေးမှာခါတော်မီ ဗိုလ်ချုပ်ပုံ ၊ ရခိုင် အကြောင်းပြောတဲ့ ကုလား ကဘေးမှာ ထိုင်နေတာတွေ နဲ့ တင်ထားတာရယ် ။သူကိုယ်တိုင်က ရခိုင်ကလည်းတိုက် ပြောထားတာတွေဟာ တော်တော် တော်တယ်ပြောရမယ်။ သံသယ တစ်ချက်ရှိစရာက အသံနဲနဲပြတ်နေတယ်။)
အခု ဦးကြောင်တင်ထားတဲ့ နေ့သစ် အင်တာဗျုး ကကော ?????
ဟူး…. မောတယ်….ဆရာကြောင်၊ “ပါပီမ” ခေတ်ကိုဖြတ်သန်းရတာ ခက်ပါရဲ့!
တောထဲက သတ္တဝါကိုတောထဲမှာထားတာဘဲကောင်းတယ်။ဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ်ကို အမဲလိုက်ခွေး
ဟုတ်တာပနော် သွား ကြ မလာကြနဲ့ ရှိနေတဲ့ အရိုင်းအစိုင်းကောင်တွေလဲ
အမြန်ဆုံး ထွက်သွားကြ မထွက်သွားချင်ရင် အေးအေးနေကြ ။
ကျုုပ်မရေးဘဲနေချင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ]စာတွေ သတင်းတွေဖတ်ပြီး လူတွေက ကို အမြင်တွေ ပြောနေကြတာပါ တကယ်တန်း ခင်ဗျားတို့လဲ မိုးသီးဆိုတဲ့ မာဆတ်ဆတ်လူငယ်တယာက်ကနေ ရွှေပြည်တော်ပြန်တဲ့ လူကြီးမျိုးသီး အဖြစ်တကယ်ရှိနေခဲ့မယ်တိုရင် ခင်ဗျားတို့ရောဘာလုပ်မလဲ အမှားများစွာလူတွေကလုပ်ကြတာဘဲ အဲဒီမှာ ကာလံဒေသံကိုလိုက်ြ့ပီးလူတွေက တွေးအခေါ်တွေအဆုံး အဖြတ်တွေကို မှီပြီး မှားချင်လဲ မှားမယ် မှန်ချင်လဲ မှန်မယ် မီဒီယာရဲ့ရှူ့ဒေါင့်တခုထဲဖတ်ပြီးတော့ ခွေးသူတောင်စားဆို ပြီး ဝိုင်းအော်မဲ့ အစား ငါ ကလဲ ဘယ်လိုစောက် ကျင့်လဲဆိုတာ ပြန်အရင်စဉ်းစားပေ းလူ တိုင်းမှာ အမှားလဲရှိဘူးတာဘဲ သူများ လုပ်တဲ့ အမှာ းကို မှမြင်တတ်ရင် တော့ မြင်တတ်တဲ့ လူတွေ ဘာလဲဆိုတာ အမှန် ကို မြင်တဲ့လူးတွေက ပြုံးကြလိမ့်မယ် ကျုပ်ဒီ ကွန့်မန့်ကို ရေးလို့ ဆဲချင်လဲ ကျုပ်ထက် ငယ်မဲ့လူတွေက လဲ အကူသိုလ် ရတာပေါ့ ကျုပ်ထက်ကြီးသူဆိုရင်တော့ …..အဲဒီလူရဲ့ အရေ အသွေးဘာလဲဆိုတာ ဂေဇက်မှာဖတ်နေတဲ့လူတွေ က အဲဒီလူရဲ့ အဆင့်ကို သိလိမ့်မယ် …ဆဲချင်ရင်လဲ ဆဲပါ တု့န်ပြန်မှူ့တိုင်းမှာ တန်ပြန့် တုံန်ပြန်မှူ့တွေရှိပြီးသားပါ…။ အိုကေ ချစ်ချင်ရင် လူတွေက မုန်းစရာကောင်းတဲ့ အရာတွေ မေ့ထားပြီး ချစ်ကြာတာသဘာဝပါ ဘဲ ..။မုန်းချင်တော့လဲ ချစ်စရာကောင်းတာတွေကိုတောင် အမုန်းမြင်ကြတာမဆန်းပါ ..ဘာဘဲပြောပြော ကျုပ်က ပုဂ္ဂလိက အတွေးတွေ ကို ပိတ်ပြီး လူတယောက်ကောင်းတာတွေကြည့်ပြီး မကောင်းတာတွေပြန်ပြင်တဲ့လူတွေကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် …ကျုပ်တို့ ဇာကနာ မိုးသီး ဆိုပြီး ဆဲနေမဲ့အစား ခင်များတို့ ရောဘယ်လောက် အမှားကင်းလဲ ဆိုတာ ကိုတော့ မေ့မနေနဲ့ ဘာလဲဗျာ ကိုဦးနှောက်နဲ့ စဉ်းစားလို မှန်နေပေမဲ့ တဖက်ကလဲ တမျိုးစဉ်းစားနှိုင်တာဘဲ ပြောချင်တာ စောက်ပြစ်တွေ ပြောနေမဲ့အစား ပြသနာ ဖြစ်ရပ်မှာ ၂ ဘက်စလုံးကြည့်ပြီး အကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ ရွေဖို့ဘဲ လိုပါတယ် ခောတ်အဆက်ဆက် မြန်မာနိုင်ငံရေး သမ်ိုင်းမကောင်းခဲ့တာလဲ ဒီသောက်ကျင့်တွေ မဖျောက်လိုပါဘဲ
ကျုပ်ကိုကိုယ်လဲ အမှားကင်းတယ် လို့မဆိုလိုဘူး ဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ လူတွေတိုင်းမဖြစ်ခင်မှာ မှားကြတာဘဲ အမှားမဖြစ်ချင်ရင် ဘာမှာမလုပ်နဲ့ပေါ့ မီဒီယာတွေက ဘယ်သူဆိုရင် ဝိုင်းပြီး ဇာကနာဆဲပြန်ပြီ ဆိုရင် ဖတ်တဲ့ ကြားတဲ့လူတွေက စောက်ရေးမပါတာ လူပါးဝလာတယ် ကတုံးက ဒီလိုပြောဆိုမဲ့ အ စား ၂ ဘက်စလုံးကိုတွေးတောဆင်ချင်တဲ့ အမြင်လေးတွေ မြန်မာ ဒီမို ကရေစီ အရေးအတွက် တွေးကြပါလားဗျာ…..။ကိုယ်တိုင်ဦးနှောက်သုံး သူတပါးမစင် အနဲ့ကြောင့် သွားပုတ်လေလွင်မပြောကြနဲ့ …။
ကျုပ်ပြောတဲ့ စကားကို လူတွေဆဲ ချင်လိပ်မယ် ဗိုလ်ချုပ်လို လူမျိုးပြောရင် ဆဲချင်မှမဟုတ်ဘူးလေ အဲဒါ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်နီုင်ကြပါစေ…….
မနေ့က သို့ မနှစ်ကမှ စမြင်လိုက်တဲ့ ဒီမို ခရေစီ အနံ့နဲ့ ဟိုလူကို အပုတ်ချ ဒီလူကိုအပုတ်ချ ကောင်းတယ်လိုကပြောလျင် မကောင်းဘူးလိုံ ပြောတဲ့သူက ခြောင်း ဘာဆိုဘာမှ မလိုချင်ဘူး …. တောမှာနေလျင် လယ်ရှိမယ် မြို့မျာနေလျင် တရက်ကို ၇၅၀ဝ ကျပ်ပေးနိုင်မဲ့အလုပ်သာရှိလျင် အရမ်းပျော်တယ်
တစ်ခါတစ်လေကြတော့ လူတွေ တော်တော်စောက်သုံးမကျတာဘဲ
သေခြာတွေးကြည့်ရင် ကျုပ်ကိုယ်တိုင်သံမဒဂျီးမဟုတ်ရင်တောင် ဆယ်အိမ်ဂေါင်းလောက်ဖြစ်သင့်တယ်
အခြေနေက ပြည်တော်ပြန်တွေနဲ့ ပြည်တွင်းက အတိုက်ခံတွေကို ရန်တိုက်ပေးသလိုသဘောတွေကို
လီးလိုဘဲ တိုလာဘီ တိုလို့တော့မဖြစ်ဘူး
ဒီတော့ကာ ခင်ဗျားတို့အားလုံး မသေမချင်းမှတ်ထားဂျဇမ်း
ပြည်တွင်းအတိုက်ခံတွေကို တစ်ဖက်လှည့်နည်းနဲ့ ဘာမှစောက်ဖြစ်မရှိဘူးပြောတယ်
ဆိုလိုကြတာက လက်ရှိမှာ NLD လိုအုပ်စုတွေအနေနဲ့ ဘာမှဟုတ်တိပတ်တိမလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုပြီး
အခြေအနေအရ သူတို့မှာလည်း အကြပ်အတည်းတွေအများကြီးရှိနေတဲ့ဟာဂျီးဟာ
အခြားမကြည့်နဲ့ ဘလက်လီဘယ် ဟုတ်ပါဘူးရောင်လို့ စစ်အစိုးရရဲ့ဘလက်လစ်တွေမှာတောင်
ငါးစိမ်းသည်တွေ ထမီလှန်ပြပြီးရန်ဖြစ်ကြသလို တစ်ရပ်ကွက်လုံးမဆီမဆိုင်တွေပါနေဒါကြည့်ပေါ့
NLD လိုအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ အသေခံပြီးလုပ်ပေးရမလိုပြောခြင်နေကြတာ ဒါကတော့မတရားဘူး
နိုင်ငံခြားကပြန်လာတဲ့ နွားတွေကလည်းပြည်တွင်းက အတိုက်ခံတွေကို လီလိုလိုမှိုလိုလိုမပြောမိစေဘို့
အတော်ခေတ်စားနေတာက နွားခြေရာခွက်ထဲမှာမနေဘဲ ပြင်ပကမ္ဘာကိုထွက်ကြည့်ကြဘာညာသာရကာ
ငါလိုးမသားတွေ ထမင်းဝတိုင်း သံချောင်းတီးနေကြတယ်
နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြပြီးပြည်ပထွက်သွားတဲ့ သတ္တဝါတွေ ဒဘုံတခေါင်းကြီးဟာ
အဲ့သည်အရေအတွက်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရောက်တဲ့အခါ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတဲ့သူက မရှိသလောက်ဘဲ
လောလောဆယ်ဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာလဲ လူလိမ်ဒုက္ခသည်တွေက ဘယ်နှစ်သိန်းတောင်
ဆိုလိုတာက လက်ရှိမှာ ပြည်တွင်းအတိုက်ခံတွေကလည်းငတ်ငတ်ပြတ်ပြတ်
ပြည်ပကနေပြန်လာတဲ့ကောင်တွေကလည်း ထမင်းကဝနေတော့ သံချောင်းတီးတဲ့လေသံနဲ့
ကျုပ်ပြောတာ ပေါက်လွှတ်ပဲစားဆိုပေမယ့် ခင်ဗျားတို့သေခြာတွေးဇမ်း
ကိုယ့်သားအရွယ်တွေရော ကိုယ့်အဘအရွယ်တွေရောကို စက်သေနတ်နဲ့ပြစ်သလို ဆဲခွင့်ရတာလည်း
ပြည်တော်ပြန်တွေနဲ့ ပြည်တွင်းက အတိုက်ခံတွေကို ရန်တိုက်ပေးသလိုသဘောတွေကို
နှပ်သုတ်စရာ တိုင်ရှိနေတာဘဲ ..
ကိုယ်စိုက်တာ ကို်ယ်ရိတ် .. (ဂီဂီ)
အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး says:
ကိုမိုးသီး ကမျိုးသန်းထွဋ် အကြီးပါ။မျိုးသန်းထွဋ်အငယ်ရှိပါသေးတယ်။
လက်ခုပ်သံကြားတိုင်း ပုဆိုးကွင်းသိုင်း ထွက်က ချင်ရင်
အရိုးနံ့လေးရတိုင်း ထောင်ချောက်ထဲ ပြေးဝင်ကြ…။
သူများက ဗွက်ပေါက်အောင်လုပ်လို့လဲ လုပ်မှန်မသိ… အံ့ရော…။